एलईडी पोस्टर स्क्रिन र साझा एलईडी स्क्रिन बीच के भिन्नताहरू छन्? जब यो तपाइँको व्यवसाय वा ब्रान्ड मार्केटिङ को लागी आउँछ, LED डिस्प्ले स्क्रिन बजार मा सबै भन्दा उपयुक्त विकल्पहरु मध्ये एक हो। यद्यपि, यी स्क्रिनहरू बजारमा विभिन्न प्रकारका छन्। एक एलईडी पोस्टर स्क्रिन देखि adver ...
एलईडी पोस्टर डिस्प्ले को आवेदन के हो
एलईडी पोस्टर व्यावसायिक प्रदर्शन बजारमा देखा परेपछि यसको बजार हिस्सा ठूलो मात्रामा बढेको छ। विज्ञापन र मनोरन्जनात्मक कार्यहरू दुवैलाई एकीकृत सूचना वाहकको रूपमा आज अन्य प्रकारका सूचना मिडियाहरूमा पोस्टर एलईडीको आफ्नै विशेष फाइदाहरू छन्। यसले आकर्षित गर्न सक्छ ...
डिजिटल एलईडी पोस्टर के हो?
डिजिटल एलईडी पोस्टर के हो? डिजिटल LED पोस्टरको संक्षिप्त परिचय यस डिजिटल LED पोस्टरको साथ आफ्नो ब्रान्डको विज्ञापन सन्देशहरूलाई आधुनिक, वैकल्पिक तरिकामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। यो कुरकुरा डिजिटल स्क्रिनले आश्चर्यजनक भिजुअल डिस्प्लेहरू प्ले गर्न सक्षम छ जसले ग्राहकहरू र आगन्तुकहरूलाई यसतर्फ आकर्षित गर्दछ ...
ट्याक्सी शीर्ष एलईडी डिस्प्ले के हो? ट्याक्सी जताततै अवस्थित छ, ट्याक्सी हाम्रो दैनिक जीवनमा अधिक र अधिक आवश्यक भएको छ। मानिसहरूलाई थाहा छ, "TAXI" शब्दको साथ कारको शीर्षमा लाइट-बक्स ट्याक्सीको प्रतीक हो। ट्याक्सी कम्पनीले पत्ता लगायो कि तिनीहरूले विज्ञापन दिएर अतिरिक्त पैसा कमाउन सक्छन् ...
स्टेज एलईडी स्क्रिन खरीद गर्न गाइड
स्टेज LED स्क्रिन LED किन्नको लागि गाईड भनेको प्रकाश उत्सर्जन गर्ने डायोडहरू हो, यो एक सीधा प्यानल डिस्प्ले हो जसले स्क्रिनमा छवि बनाउन LEDs को सङ्ग्रह प्रयोग गर्छ। हालका वर्षहरूमा, तिनीहरू विवाह हल, चर्च नेतृत्व स्क्रिन, विवाह नेतृत्व स्क्रिन, पु ... लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रचलनमा परेका छन्।
एलईडी भिडियो पर्खाल र चर्च स्टेज प्रदर्शन
LED भिडियो भित्ता र चर्च स्टेज प्रदर्शन आधुनिक पूजा वातावरणमा, दृश्य प्रविधि मण्डली संलग्न गर्न सबैभन्दा शक्तिशाली र भरपर्दो स्रोतहरू मध्ये एक भएको छ। अब एक दिन धेरै पूजा घरहरू सन्देश, समाचार पूजा र अधिक सुनाउन भिडियो भित्ताहरूमा मोडिन्छन्। एक नेतृत्व चर्च स्टेज displa...
पोस्टर एलईडी डिस्प्ले, पोर्टेबल एलईडी पोस्टर बोर्ड प्रदर्शनी, एयरपोर्ट, स्टेशनहरूको लागि पूर्ण रंग
LED पोस्टर डिस्प्लेले उज्यालो प्रकाश भएका ठाउँहरूमा पनि स्थिर र उच्च गुणस्तरको प्रदर्शन प्रभाव सुनिश्चित गर्न विभिन्न स्थापना समाधानहरू, सजिलो सञ्चालन, बहु सञ्चार मोडहरू, उच्च चमक, कम ऊर्जा खपत र अल्ट्रा-थिन बडी लगायतका सुविधाहरू समावेश गर्दछ। यो एक नयाँ उत्पादन हो जुन उल्टो ...
एलईडी डिस्प्ले स्क्रिन फाइदाहरू
सधैं जस्तै, एक प्रदर्शनी पछि, म सयौं नयाँ विचारहरू र डिजिटल बिलबोर्ड बजारको राम्रो बुझाइको साथ घर आउँछु। धेरै ग्राहकहरूसँग कुरा गरिसकेपछि र भर्खरै मिलानको भिस्कम इटालियामा धेरै बुथहरू भ्रमण गरेपछि मैले पहिले नै थाहा भएको कुरा महसुस गरें तर त्यसले मलाई प्रभावित गर्यो... द v...
मौसम अत्याधिक चिसो हुँदा तपाईंको LED स्क्रिन कसरी सुरक्षित गर्ने
यो वर्षको समय हो जब धेरै ग्राहकहरूले मलाई LED भिडियो भित्ताहरूको सञ्चालन तापमानको बारेमा सोध्छन्। जाडो आइसकेको छ र यो जाडो हुने देखिन्छ। त्यसोभए आजकल मैले धेरै सुनेको प्रश्न भनेको "कति चिसो धेरै चिसो छ?" डिसेम्बर र फेब्रुअरी बीचको महिनाहरूमा ...
च्यानल पत्रहरू के हुन् र म कुन प्रकारको च्यानल पत्र कसरी छनौट गर्छु?
च्यानल अक्षर रेखाचित्र Gemini-wChannel अक्षरहरू वा प्यान च्यानल अक्षरहरू ठूलो व्यक्तिगत अक्षरहरू हुन्। तिनीहरू सामान्यतया व्यवसाय, चर्च र किनमेल केन्द्रहरूमा बाहिरी चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ तीन आधारभूत प्रकारका च्यानल अक्षरहरू छन् जसमा चौथो प्रकार दुई प्रकारको संयोजन हो। प्रमुख...
उडान मामला के हो?
फ्लाइट केस नाजुक उपकरणहरू ढुवानी गर्नको लागि भारी, धातु-प्रबलित केस हो, प्राय: विशेष-उद्देश्य उडान केस काठबाट अनुकूलित। फ्लाइट केसहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिने विशिष्ट भागहरू समावेश छन्: एल्युमिनियम एक्सट्रुसनहरू, स्टिल बल कर्नरहरू, रिसेसेड बटरफ्लाइ लचहरू र ह्यान्डलहरू, सबै रिभेट्सले फिक्स गरिएको। स...
स्टेडियम एलईडी स्क्रिन
LED स्क्रिन प्रणालीहरू तिनीहरूको सजिलो प्रयोग र उच्च विज्ञापन राजस्वको कारण रुचाइन्छ। अक्सर स्टेडियमहरूमा यी एलईडी स्क्रिन प्रणालीहरू एक्रोसमा आउँछन्। स्टेडियम एलईडी स्क्रिन प्रकार र सुविधाहरू स्टेडियम नेतृत्व प्रदर्शन प्रणाली दुई तरिकामा देखिन्छ। पहिलो, स्कोरबोर्डले खेलको स्कोर देखाउने स्क्रिन र अर्को ...